Ihe na-eme ka data ọnwụ na SSD
Olee otú naghachi data si SSD on windows
Olee otú naghachi data si SSD on Mac
Dị iche n'etiti SSD na HDD ike mbanye
Siri ike-State Drive, popularly maara dị ka SSD, bụ data nchekwa na ngwaọrụ na nwere mgbakọ nke integrated circuit dị ka ebe nchekwa. Ọ nwere Anọchie Anya niile ochie electrometrical magnetik diski. Nke a bụ oge a na nkà na ụzụ na-eji kọmputa interfaces na ọhụrụ m / O interfaces dị ka SATA, na e kere ilebara chọrọ nke SSD. Ebe a na-ya atụmatụ:
E nweghị ndị na-akpali akpali n'ibu akụkụ ka tụnyere diski ike draịva ma ọ bụ floppy.
Ndị a disks ndị ọzọ na-eguzogide ọgwụ vibration na nke anụ ahụ ịtụnanya.
Ha bụ ihe nkịtị, na-erughị latency na ala ohere oge.
Ngwakọ draịva na-kere iji SSD na HDD iji melite arụmọrụ.
Data ọnwụ nke ka nsogbu ọrụ na mgbe niile. Nke a bụ ihe ọ bụla na-eme na SSD ma e nwere dị iche iche na-akpata na mmetụta ya. Ndepụta nke ihe na-eme ka data ọnwụ na SSD:
Mgbe mbanye na ahụ mebiri emebi, i nwere ike ida gị data.
Ọ bụrụ na-aga n'okpuru elu ntọala aka mbanye aka, ole na ole na-ezighị ezi ntọala nwere ike ime ka data atụfu.
On software larịị, mgbe virus agha etịbe ọtụtụ data nwere ike ina-efu.
N'ebe ahụ ọtụtụ ihe ndị ọzọ nwere ike ime ka data ida dị ka ụgwọ nke wdg
Taa, ihe nile nke windows usoro ojiji SSD. Ruru ka ihe ọ bụla na i furu efu na data, e nwere ụzọ nke i nwere ike weghachite data. Otú ọ dị, tupu ị weghachite data jide n'aka na ị adịghị dee ọ bụla data ka SSD, nke a pụrụ ime ka ọ gaghị ekwe omume iji naghachi data.
Gbalịa ịchọta ya na egweri biini Ọ bụrụ na ị na-eji Windows desktọọpụ, mgbe niile na-ehichapụ data na-aga egweri biini. Otú ọ dị, ọ bụ nanị na data, nke e ehichapụ eji naanị ihichapụ nhọrọ ma ọ bụ hichapụ bọtịnụ. Ọ bụrụ na ị na-eji nnofega + ihichapụ nhọrọ faịlụ na-kpọmkwem ehichapụ si usoro na ha na-agaghị achọta egweri biini. Lee ndị nzọụkwụ naghachi data si egweri biini:
Gaa egweri biini na kọmputa gị. Na-emekarị ọ bụ na gị na desktọọpụ.
Ugbu a gaa faịlụ na ị chọrọ iji weghachi. Right pịa ya na-aga nhọrọ weghachi.
3 nzọụkwụ naghachi furu efu data si SSD ike mbanye na enyemaka nke Wondershare Data Recovery
Wondershare Data bụ otu n'ime ụzọ kasị mma naghachi data gị SSD on windows. Ọbụna ma ọ bụrụ na i ehichapụ egweri biini ma ọ bụ nnofega ehichapụ faịlụ, ọ bụ omume na-agbake-eji nke a software. Ọ bụ nnọọ ike nke na ọ pụrụ naghachi data ọbụna ma ọ bụrụ SSD okodomo virus, ma ọ bụ ụfọdụ ihe ndị ọzọ mebiri. Ị nwere ike ibudata Wondershare Data Recovery si Wondershare website. Soro ndị a atọ iji naghachi data gị window kọmputa.
Akpa wụnye na ẹkedori wondershare mgbake na anyị na Windows. Ugbu a, họrọ nhọrọ Echefuola faịlụ mgbake n'ihi na windo version.
Ugbu a, ọ ga-ewe gị na-esote ihuenyo ebe ị ga-họrọ SSD mbanye si ebe ị chọrọ iji naghachi faịlụ. Ọ bụrụ na SSD bụ mpụga, ike mbanye jide n'aka na ị jikọọ ya na kọmputa gị n'ihu gị ẹkedori software. Dị pịa na SSD.
Ugbu a ịhụchalụ scanned N'ihi. Lee maka faịlụ ị chọrọ iji naghachi na ego ya mma. Ugbu a ego faịlụ na ị chọrọ iji naghachi. Niile i nwere ime bụ pịa naghachi.
All faịlụ ga-natara ka chọrọ ọnọdụ na kọmputa gị ma ị nwere ike na-agba ọsọ faịlụ ego ma ọ bụrụ na ha bụ ndị dị mma.
Ọ bụrụ na ị na-eji MAC mgbe ahụ, ọ dịkwa mfe ịchọta ehichapụ gị ahịhịa. Otú ọ dị, ọ bụrụ na i ehichapụ na-adịgide adịgide site na mberede, mgbe ahụ anyị ga-achọ ụzọ ndị ọzọ ha na-agbake furu efu data ma ka e bụ ụzọ nke a na ụdị furu efu naghachi data. Ebe a na-ụzọ abụọ i nwere ike naputa furu efu data si SSD on Mac
Gbalịa ịchọta ya na Mkpofu Mgbe ọ bụla ị ihichapụ faịlụ site na ị Mac ha na-aga ahịhịa. Ha na-agaghị n'ezie ehichapụ site na kọmputa kama ha na-ewepụ ha ọnọdụ ka ahịhịa. Nke a na-esetịpụ ezi naanị ma ọ bụrụ na i ehichapụ iji Nhichapụ nhọrọ. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị na-eji nnofega ihichapụ, faịlụ ga-kpamkpam wepụrụ gị na kọmputa. Ruru ụfọdụ virus ma ọ bụ ndị ọzọ malfunction, ma ọ bụrụ na data na-efu, e nweghị ụzọ i nwere ike naputa site na ahịhịa. Lee ndị nzọụkwụ naghachi faịlụ site na ahịhịa:
- Ị nwere ike ịchọta Mkpofu na akara ngosi na desktọpụ gị ma ọ bụ na gị na dick, dị nnọọ ẹkedori ya.
- Ugbu a, ị ga-ọkọnọ na ndepụta nke faịlụ ndị ahụ n'ebemkpofuozi. Họrọ faịlụ na ị chọrọ iji weghachi na ịrụ a nri click. Họrọ nhọrọ Tinye Back.
Faịlụ a ga-eweghachi ya mbụ ebe na kọmputa gị.
3 nzọụkwụ naghachi furu efu data si SSD ike mbanye na enyemaka nke Wondershare Data Recovery for Mac
Ọ bụrụ na i kwụsịrị kpam kpam faịlụ site na gị Mac, echegbula, ị ka nwere ike inweta gị faịlụ azụ. Nzọụkwụ ndị a nwere ike na-rụrụ ma ọ bụrụ na SSD a nọ unaltered na ọ na-adịghị ahụ mebiri emebi nke ukwuu.
Ị nwere ike iji Wondershare Data mgbake maka Mac. The software dị mfe iji na-enye gị ohere iji naghachi nile di iche iche nke faịlụ n'ihi na ị na gị Mac. Àgwà nke faịlụ a na-nọgidere na-enwe mgbe mgbake naanị ma ọ bụrụ na faịlụ mgbe Doppler nwere ezi ọnọdụ. Lee ndị atọ iji naghachi gị SSD data on Mac.
Wụnye Wondershare Data mgbake na-agba ọsọ na kọmputa gị. Ugbu a gaa Echefuola File Iweghachite.
Ugbu a, ị ga-enwe iji họrọ SSD si nke ị chọrọ agbake disk. Ọ bụrụ na ọ bụ esịtidem ọ ga-edepụtara ma ọ bụrụ na ọ bụ mpụga jide n'aka na ị jikọọ ya na gị na Mac n'ihu gị ẹkedori software. Ugbu a dị nnọọ pịa na disk ị chọrọ iṅomi.
Ugbu a, ọ ga-akpaghị aka iṅomi maka ehichapụ faịlụ gị disk na i nwekwara ike ihuchalu ndị a faịlụ ka ego ọnọdụ nke faịlụ. Niile i nwere ime bụ ego faịlụ na ị chọrọ naghachi wee pịa on naghachi.
Ị pụrụ ịhụ natara faịlụ gị Mac. Ịnweta ha na-ahụ ma ọ bụrụ na ha bụ ndị dị mma.
Dị iche n'etiti SSD na HDD (price, maximam ikike, Speed, fragmentation, anwụ ngwa ngwa wdg)
Price- Ha bụ n'ozuzu oké ọnụ mgbe ahụ HDD dị ka ha bụ kasị nso-nso ụdị na-eji nkà na ụzụ.
Capacity- SSD nwere ndị kasị elu ikike nke upto 4TB. Otú ọ dị na ha dị nnọọ obere na-nnọọ oké ọnụ.
Adị- SSD bụ ukwuu karịa HDD. Ha nwere ike buut na nkezi kọmputa na-erughị otu nkeji.
Fragmentation- Na SSD e nweghị fragmentation nsogbu dị ka ọ dịghị mkpa ebe faịlụ na-echekwara na disk
Durability- dị ka e nwere ibughari akụkụ lilke HDD ọ na-echebe si dị iche iche na-ebibi ihe na ike na-arụ ọrụ ogologo oge.
Price- HDD ndị na-erughị oké ọnụ mgbe ahụ SSD ka ha na-eri ọkara price on SSD.
Capacity- Ha na-adịghị elu ikike dị ka nke HDD dị ka ha adịghị eji integrated na sekit na sekit nke na-enye ndị ọzọ na-akpakọba ikike.
Adị- HDD nweghị egwuregwu na ọsọ nke SSD. Ọ bụ ezie na iji nwayọọ na ha bụ ngwa ngwa iji eme ka ndị niile na-arụ ọrụ dị mfe karị na ngwa ngwa.
Fragmentation- Dị ka ha na-eji na-aga n'ihu ọgwụgwụ gaba na ịchekwa usoro e na-aga n'ihu nsogbu nke fragmentation na SSD.
Durability- ha na-eji n'ibu na akụkụ na-akpali, na na oge ha na-mebiri emebi ruru ka ujo ma ọ bụ ndị ọzọ. N'ihi ya, ha na-erughị inogide mgbe ahụ SSD.
> Resource> Naghachi> Olee ịrụ a SSD data mgbake na ala?